Muka Mukarratti Muran Malee Foon Foonirratti Hin Muran! Kutaa – 2. |
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 10, 2017.
Intalli garaa laaftu ilma haadhaaf ulfoofti. Gara laafinni Oromoof diina horee jira. Federaalummaan jiraachuun yoo fedheen gama hundaa jiraate malee bakka hin qabu. Mirgi sabaa fi sab-lammoota biyyattii dirqii wal qixa jechuun sabni guddaan saba xiqqaan haa rooffirfamu jechuu miti. Imaammanni Wayyaaneen akka biyyaatti karoorfatte garuu dhugaa kana mul’ise. Afaaniin dimokiraasii faarsaa hojiidhaan abbaa irrummaan ummata unkaraa har’a geette. Waraabessa waraaname irraa nagaya eeguun gowwummaadha. Ofuu nyaataa nama dhiisaa. Ummattootni biyyattii gocha murni xiqqaan Ogaaden TPLFn ijaaramee ummata Oromoo irratti fixiinsa shanyi diguugdummaa irratti raawwatu osoo arganii fi dhagahan cal’eessa filachuun kun gochaa kanatti jaalala qabaachuu akeeka.
Kan nama miidhe caalaa kan namatti ilaaletu irra badaadha. Lolli Wayyaaneen harka kittillayyoota isii keessaan ummata Oromoo irratti baname bakka maraa hanqachuuf hin jiraatu. Nageenya biyyattii hawwamu guututti booressuuf jiraata. Balaan kun babal’atee sadarkaa qabamuu hin dandeenye irra osoo hin gahin ummattootni biyyattii cufti sagalee isaanii dhageesisuun barbaachisaadha. Eboo darbatanii jinfuu hin qabatan akkuma jedhame, ummata Oromoo irratti duula baname balaaleffachuun akka dhaabbatu dhiibbaa gochuun nagayummaa hergeree biyyattiif qooda ol aanaa akka qabu hin haalamu. Oromoon gara laafessi garaa jabeessa ta’ee gaafa gadi ba’e galaana eenyullee dura dhaabbachuu hin dandeenye akka ta’e wal nama hin gaafachiisu. Murni amma ummata Oromoo fixaa jiruu fi kan gara fuula duraatti abjuu akkasii qabanis ummata Oromoof xurii qeensa jalaa hin gahan.
Of ittisuun gara haleellaatti yoo jijjiirame gaanfi Afrkaa haroo dhiigaa ta’uuf jiraata. Firoottanii fi diinottan Oromoo cufti kana tolchanii beeku. Osoo yeroon hin dabarre hamtuu tana oolchuuf carraaquun dhimma gateettii Oromoo irratti gatamee ilaalamu kun ummatoota biyyattii hundaaf dirqama ta’uu male. Ilmaan Oromoo nagaya jaallachuun sodaachuu akka hin ta’in ifaadha. Ammaan tana Oromoon yeroo mogolee diina isaa jalatti wal dhahu bira taree jira. Gochaaleen yeroo ammaa Oromiyaa guutuu keessatti mul’atan kanaaf ragaa gahaa dha. Tarkaanfiin itti aanu walabummaa fi bilisummaa isaa harkaan gahachuu qofa. Bubuutotni ammas hin bari’iniif kan yoo mootummaan kun hin jiraatin akka jiraachuu hin dandeenyetti of amaniisanis yoo jiraatan of yaadachuun irra jiraata. Asii achi muka mukarratti muranii fi foon foonirratti muranis ta’uu hin qabaatu.
Wareegamni gootaa cidha!
Boochi haadha gootaa ilillee!
Kutaa – 1: Muka Mukarratti Muran Malee Foon Foonirratti Hin Muran!